Mia: Uphengululo lweshishini laseKhaya, ukuthembeka, kunye neCRM | Martech Zone
I-Mia: Uphengululo lweShishini laseKhaya, ukuthembeka, kunye neCRM
NgoLwesibini, Julayi 11, 2017 Douglas Karr
mia, ukusuka kwi-Signpost, iskena idatha kwizigidi zabathengi ukufumana amathuba amatsha okuthumela imiyalezo elungileyo ngexesha elifanelekileyo. Itekhnoloji ye-AI esekwe kudala ii-imeyile kunye nemibhalo ephendulwa ngabathengi bakho, inyusa ukuthengisa kwakho nge-10% kunye nokunyuka kovavanyo lwakho malunga neenkwenkwezi ezimbini ngokomndilili.
UMia ufikelela kubathengi ukuze abone ukuba bangayincoma na ishishini lakho kwaye, ukuba bathi ewe, ulandela isikhumbuzi sokushiya iinkwenkwezi ezintlanu kwiindawo zokuphonononga.
Ngokuqokelela ii-imeyile, iinombolo zefowuni kunye nedatha yokuthengiselana, uMia uyazi ukuba abathengi bakho bayakuxabisa kakhulu. Abathengi abatsha bafumana isibonelelo esamkelekileyo kwaye abathengi abathembekileyo bafumana umvuzo ngokuqhubeka kweshishini. I-Mia ide inyanzelise ukuthatha inxaxheba kwiinkqubo zokudlulisela ezenzelwe nje ishishini lakho.
I-Mia iphinda ihlalutye iakhawunti yakho kwaye ithumele iingcebiso ngephulo lakho elilandelayo. Unokubanjwa ngesandla kwaye uvumele uMia akusebenzele. Qho ngeveki uMia uza kuhlalutya umsebenzi wakutshanje kwaye athumele ingxelo yokuba bangaphi abafowunelwa abatsha abongeziweyo, othe wanika uphononongo lweenkwenkwezi ezi-5 kwaye yeyiphi kubathengi bakho ababuyele kwakhona.
Iimpawu ezongezelelweyo zeMia
Ngokwezifiso -Imikhankaso ye-imeyile, uyilo kunye nokuphononongwa kweendawo.
ingxelo -Umkhondo kunye nokuthelekisa amanqaku akho okhuthaza umnatha (NPS) kuzo zonke iindawo zakho. Fumana ingxelo malunga noko kusebenzayo noko kunokufuna ukuphucula.
Integration -Umqondiso womqondiso API ikuvumela ukuba udibanise nayiphi na inkqubo yakho yangoku ngemizuzu.
Ukulandelela ukuThengwa -Nika amandla ukulandela umkhondo wokuthenga ukuvala iluphu kwiinzame zakho zentengiso. Idatha yokuThengiselana iya kuphakamisa umyalezo wakho wokunxibelelana, unikeze inyani 1: 1 unxibelelwano.
Imiyalezo ebhaliweyo -Ngoku-8x ukubandakanyeka kwe-imeyile, uMia ukwathetha ngethemba lakho kunye nabathengi ngombhalo.
Ngamanye amaxesha ufuna ukuthetha nomntu. Iqela lethu likulungele ukunceda ukuba uyayifuna.
UkuThengiswa kweShishini laseKhaya kunye noMqondiso oLindelweyo Iziphumo
tags: shishini lendawocrm yeshishini lendawoyendawo seoiimephuUphengululo lwe-IntanethiukulinganisaReviews
Douglas Karr Tuesday, July 11, 2017
I-WordPress: Bhala ngaphezulu iKhowudi emfutshane ukusuka kumxholo womzali kumxholo womntwana wakho
Ubukrelekrele obuBonakalayo beNetra: Jonga iliso lakho kwiBrazil ngokubonakalayo kwi-Intanethi